Voampanga ho nanao herisetra ny polisy Indiana rehefa nanaparitaka ny fihetsiketsehana manohitra ny CAA tarihin’ny mpianatra ao Delhi · Global Voices teny Malagasy
Mifampizara ny sarin'habibiana ataon'ny polisy ny olona
Voadika ny 21 Desambra 2019 8:19 GMT
Mpianatra ao amin'ny Oniversite Savitribai Phule any Pune, manohitra ny Lalàna Fanitsiana ny Maha Olom-pirenena sy ny herisetran'ny polisy amin'ireo mpianatry ny oniversite Jamia Millia Islamia teo anoloan'ny polisy sy ireo mpiambiana ny oniversite i India. Sary avy amin'ny mpikatroka iray tsy mitonona anarana. Nahazoana alalana.
Rehefa lany tao amin'ny Rajya Sabha (Antenimieran-doholona) tamin'ny vato 125-105, dia nosoniavin'ny filoha Indiana Ram Nath Kovind ny Volavolan-dalànan'ny Fanitsiana ny Maha Olom-pirenena – Citizenship Amendment Bill (CAB) ary lasa fantatra amin'ny anarana hoe Lalànan'ny Fanitsiana Mahaolompirenena – Citizenship Amendment Act (CAA) tamin'ny 12 Desambra 2019. Niteraka tsikera avy amin'ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena sy ny mpanohitra ho manilikilika tsy ara-drariny ny Miozolomana ny lalàna, izay manome lalana hahazoana zom-pirenena ho an'ireo mpifindra monina tsy Miozolomana avy amin'ireo firenena manodidina toa an'i Pakistan, Bangladesh sy Afghanistan.
Hatramin'ny nampidirana azy tao amin'ny Lok Sabha (Antenimieran'ny depiote) tamin'ny 9 Desambra 2019, nipoaka manerana ny firenena ny fihetsiketsehana, indrindra indrindra tao amin'ny fanjakana avaratra atsinanana ao Assam, Tripura ary Meghalaya.
Vakio: Miteraka ahiahy anti-Miozolomana ny volavolan-dalànan'ny zom-pirenena ao India
Vetivety dia niparitaka nanerana ny renivohitra Delhi ny fihetsiketsehana. Nanomboka tamim-pilaminana tamin'ny 15 Desambra 2019 tao amin'ny oniversite Jamia Millia Islamia ao Delhi ny fihetsiketsehana notarihan'ny mpianatra tao amin'ny renivohitra, na izany aza, nivadika feno herisetra ny zava-drehefa rehefa nisy nitora-bato sy nandoro ireo fiara fitateram-bahoaka roa sy moto teo akaikin'ny oniversite. Tsy mbola fantatra ireo meloka nahavita izany herisetra izany saingy ny hariva, nanafika ny tobim-pianarana, trano famakiam-boky sy ny moskea ireo mpikambana 300 ao amin'ny milisy sy ny polisin'i Delhi misahana ny rotaka.
Vakio ity: Notapahana ny aterineto satria mihamafy ny fihetsiketsehana manohitra ny Lalànan'ny Fanitsiana Mahaolompirenena ao avaratra atsinanan'India
Araka ny fanambaran'ny lehiben'ny oniversite, tsy nahazo alalana mialoha hiditra ny faritry ny oniversite ny polisy fa niditra an-keriny. Nampiasa etona mandatsa-dranomaso sy kibay ny polisin'i Delhi, nahatonga ny mpianatra hiampanga ny fisian'ny herisetra mahery vaikan'ny polisy. Mpianatra teo amin'ny 200 teo no naratra ary 100 no notanana tany amin'ireo tobin'ny polisy.
Satria nikatona tao Delhi ireo toby metro miisa 17 noho ny fitroarana. Dia maro ireo sekoly ambaratonga faharoa sy kolejy ao Atsimon'i Delhi mbola nikatona ny 16 Desambra 2019.
Satria niditra media sosialy mba hitady fanampiana ireo mpianatra, nisy hatrany ny ahiahy ny mety hanakatonana ny tambajotra. Nanomboka niparitaka tao amin'ny Instagram ireo lahatsary sy sary misy ny tranga. Nanomboka nandefa tsanganana momba ny zava-nitranga ny vahoaka mba hampiely fanentanana.
Niresaka tamin'ny mpianatra tao anatin'i Jamia izay nandefa ity lahatsary ity tamiko niaraka tamin'ny lahatsary hafa. Nilaza izy fa tafahitsoka ao anatin'ny tranom-boky feno setroky ny etona mandatsa-dranomaso ireo mpianatra ary tsy afa-niaina nandritra ny fotoana maharitra. Ny sasany kosa afaka nivoaka tao ihany
Filazan'ireo nanatri-maso #JamiaProtest:
Nitifitra etona mandatsa-dranomaso tao amin'ny toby fianarana ny polisin'i Delhi
Niditra ny toby & nanimba efi-pianarana, tranom-boky sy moskea
Nitifitra tamin'ny bala tena izy tamin'ireo mpianatra
Nampitahotra ireo mponina tamin'ny tifi-danitra
Nilatsaka tao amin'ny faritry ny Hôpitaly Fianakaviana Masina ny baomban'etona mandatsa-dranomaso iray
Fihetsiketsehana ivelan'ny foiben'ny @DelhiPolice ao ITO ao Delhi mba hitaky ny fialàn'ny polisy ao amin'ny tobin'i Jamia ary hanatsahatra ny herisetra amin'ny mpianatra.
Nitombo ny hatezerana satria nizara sary tao amin'ny Instagram ireo mpiserasera:
Afisy mampitaha ny filoha Indiana Narendra Modi amin'i Adolf Hitler tao amin'ny Oniversite Savitribai Phule ao Pune, India nandritra ny fihetsiketsehana. Sary avy amin'ny mpikatroka tsy mitonona anarana. Nahazoana alalana.
Mihamitombo ihany koa ny fitakiana ao amin'ireo olo-malaza mba hijoro hanohitra ny herisetran'ny polisy. Natao nanerana ny firenena tany amin'ireo oniversite maro hafa ny fihetsiketsehana ho firaisankina amin'ireo mpianatry Jamia Millia Islamia.
Mpianatra ao amin'ny Oniversite Pondicherry, IISC- Bangalore, Oniversite Jadavpur (Kolkata) ary maro hafa no hanao fihetsiketsehana androany ao amin'ny toby fianaran'izy ireo ho firaisankina amin'ireo mpianatry ny Jamia Millia Islamia, Delhi.
Niala ny faritry ny fianarana ireo mpianatry ny oniversite Jamia Millia Islamia ny ampitso rehefa navotsotra ireo rehetra notanana. Voalaza fa nosimbaina ny toby fianarana ary namaritra izany ho faritry ny ady ny mpianatra.
Nanasaraka ny tenan'izy ireo tamin'ny herisetra ny mpianatra ary nandà ihany koa ny polisy fa tsy nampiasa bala fingotra tamin'ireo mpianatra. Araka ny filazan'ny Komity lefitry ny Polisin'i Delhi, voatery nampiasa entona mandatsa-dranomaso ny polisy rehefa nisy nitora-bato avy ao anatin'ny oniversite izy ireo, nodorana ireo fiara fitateram-bahoaka ary polisy iray no naratra. Satria nahazo vahana tao amin'ny media sosialy ny adihevitra, nanomboka naneho hevitra ny vahoaka ka misy ireo mijoro ho amin'ny firaisankina amin'ny hetsiky ny polisy.
Araka ny tatitra avy amin'ny News18, nanamafy ny polisy fa tsy ny mpianatra no nanomboka ny herisetra nandritra ny fihetsiketsehan'izy ireo. Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, nanome antoka ny tompon'andraikitry ny Seraseram-bahoaka ao amin'ny Polisin'i Delhi fa hotapahana amin'ny alalan'ny famotorana lalina ataon'ny Sampana misahana ny Heloka Bevava ny tamberina andraikitra tamin'ny zava-nitranga.
Mandritra izany, nampiasa etona mandatsa-dranomaso sy kibay tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana rehetra tao amin'ny firenena ny polisy.
Fantatra fa hitohy manerana ny firenena ny fihetsiketsehana sy ny diabe mba hitakiana fandraisana andraikitra amin'ny herisetran'ny polisy amin'ireo mpianatry ny oniversite Jamia Millia Islamia ary koa ny fanafoanana ny Lalànan'ny Fanitsiana mahaolompirenena.
Lalànan'ny fanitsiana mahaolompirenena (CAA)
Rejistra Nasionalin'ny Olom-pirenena (NRC):